Rapid Prototyping Services, Kukurumidza kugadzira - Gadziraproto
Rapid jekiseni richigadzirisa
Kubva Dhizaini kuenda kuPrototyping kune Kugadzira, isu takagara takagadzirira kushandura pfungwa dzako kuti dzive dzechokwadi uye nekupa mhinduro dzekumberi dzekugadzira dzakakodzera zvigadzirwa zvako.
Kukurumidza Prototyping & Kugadzira
Isu tiri shamwari yako yakavimbika yeR & D. Kubva pane dhizaini yeCAD kune yepanyama prototype mumaoko ako, uye pakupedzisira kuchikwata chako, inokurumidza kupfuura nakare kose. Isu takagadzira yazvino inokurumidza prototyping tekinoroji kusangana nemadhizaini ako ekugadzira, uye tichashanda newe kuongorora nekuvandudza yako chigadzirwa mazano, kuyedza kushanda, uye ongororo yeinjiniya. Yedu yekukurumidza prototyping masevhisi anosanganisira CNC prototyping, 3D kudhinda, yekugegedza kukanda, kukurumidza tooling, jira simbi prototyping, uye prototype kupedzisa.
Sezvo iwe uchienderera mberi nerwendo rwako rwekuvandudza uye kuunza chigadzirwa chitsva kumusika, une dzakateedzana sarudzo dzekuita kana zvasvika pakuratidzira - kunyangwe iwe uchizotanga Hardware kana chigadzirwa che software, kana mubatanidzwa wezvose - iwe unofanirwa kuve nemuenzaniso wakagadzirwa. Mushure mekunge iwe wabudirira kuisa hwaro hwekuvandudza maitiro uye wakakugadzirira iwe maCAD mamodheru akagadzirira, iwe unosvika pane inotevera sarudzo. Usati wagadzira prototype yezvakagadzirwa iwe unofanirwa kusarudza kuti rudzii rwechiratidzo chauchazovaka. Kunyangwe iwe uri kuzviita iwe pachako kana kuhaya inokurumidza prototyping kambani, iwe unofanirwa kuziva icho chinangwa chako prototype chicha zadzikisa nekuti zvinobatsira kusarudza dzakakodzera nzira, hunyanzvi, uye zvigadzirwa zvekuvaka. Tine izvozvo mupfungwa, ngatipfuurei nemhando dzezviratidzo uye zvinangwa kumashure kwekuzvivaka.
Gadziraproto. Kucheka-kumucheto Zvivakwa.
Paunowedzera CreateProto kuchikwata chako, unokohwa mibairo yegumi ramakore reruzivo rwakabatanidzwa neruzivo nehunyanzvi pakucheka-tekinoroji. Iko kusanganisa kunotibvumidza isu kuti tipe yega yakasarudzika-yakagadzirirwa enjiniya uye yekugadzira mhinduro uchishandisa ese marudzi esimbi, mapurasitiki, uye zvekunze zvinhu, zvinogara zviri panguva uye nehunyanzvi hwaunogona kuvimba nahwo.
TORA CHIKAMU TAURA NESU
Mashandiro Aungaita nesu
Isa iyo Faira reCAD
Kutanga, ingo sarudza yekugadzira maitiro uye kurodha 3D CAD faira.
Tinogona kugamuchira zvinotevera faira mhando:
> Parasolid (.x_t kana .x_b)
> .stl mafaera:
Wona Akagamuchirwa Mafaira
Viga Mafaira Akagamuchirwa
Dhizaini Ongororo Inoitwa
Mukati mamaawa mashoma isu tinokutumira dhizaini yekugadzira (DFM) ongororo uye chaiyo-nguva mitengo.
Pamwe nemitengo chaiyo,
yedu yekudyidzana quote inosheedzera chero chakaomesesa kugadzira maficha akavakirwa
pane yekugadzira nzira yawasarudza. Izvi zvinogona kubva pane zvakaoma kuumba undercuts kusvika kumakomba akadzika pane zvakagadzirwa zvikamu.
Ukangotarisisa quote yako uye nekuisa odha yako, isu tinotanga iyo yekugadzira maitiro. Isu tinopawo sarudzo dzekupedzisa.
Isu tinopa dzakasiyana siyana dzekupedzisa sarudzo kune ese mabasa ekugadzira. Izvi zvinogona kubva paupfu jasi kupedzisa uye anodizing kune yakakosha gungano uye yakapetwa inoiswa.
>CNC Aluminium machine
>CNC Prototype machine
> Urethane Vacuum Kukanda
> 3D Kudhinda:
Yedu yedhijitari yekugadzira maitiro anotibvumidza kuburitsa zvikamu nekukurumidza semazuva matatu.
Kubudirira Mhiri Maindasitiri
Ona mashandisiro anoita makambani epasirese epasi rose kushandisa kugadzirwa kwedhijitari yekukurumidza prototyping uye pa-kudiwa kugadzirwa. Isu tinoshumira huwandu hwakawanda hwemaindasitiri kubva kubva kunoponesa hupenyu zvigadzirwa zvekurapa kune yeaerospace injini zvikamu.
WOONA INDUSTRIES ZVAKASHANDISWA
102, 3rd Kuvaka, Tanglian 3 Street, Tangxia Town, Dongguan, 523710
Kurumidza Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Kuchengetedza, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Kukurumidza Prototyping, Cnc Rapid Prototyping,